Sanad ka hor maanta oo kale ayaa loo awood sheegtay ASWJ | KEYDMEDIA ONLINE
Sanad ka hor maanta oo kale ayaa loo awood sheegtay ASWJ
Waxaa sanad laga joogaa maalintii cagta la mariyay ururkii ASWJ ee ka talinayay qeybo kamida gobollada Bartamaha Soomaaliya, kuwaasoo ka xoreeyay magaalooyin badan kooxdii Al-Shabaab.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidamo diyaarado lagu daabulay oo laga qaaday magaalada Muqdisho ayaa waxay gaareen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug si ay ula dagallamaan ururkii Ahlu Suna Wal Jamaaca ee bartamaha Soomaaliya kula dagaallamay kooxdii Al-Shabaab.
Ciidamadii Haramcad iyo Gorgor ayaa fuliyay howl gal lagu cirib tirayay hoggaankii sare ee ASWJ xilligaas oo ay ku sugnaayeen Xero Inji oo saldhig u ahayd ururkaasi, waxaana dagaal qaatay saacado uu dhex maray ciidamada labada dhinac, kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug oo is garabsanaya iyo Ciidamadii ASWJ ee Xerada dhexdeeda ka dagallamayay.
Dagaalka oo ahaa mid qorsheysnaa ayaa wuxuu ka billowday rasaas la huwiyay gawaari ay la socdeen qaar kamida saraakiisha ururka ASWJ iyadoo ay iska caabin sameeyeen, waxayna ugu dambeyntii sababtay in weerar toosa lagu qaado xero Inji oo ay xilligaa ku sugnaayeen madaxdii saree e ASWJ sida hoggaamiyahii ururka Macallin Maxamuud iyo Madaxii xukuumaddii hore ee Galmudug Sheekh Shaakir.
Weerarka lagu qaaday Xerada ayaa loo adeegsaday hubka culus iyo kan fudud, muddo saacado ah markii uu socday weerarka ayaa waxaa la billaabay waan-waan lagu joojinayo xabadda, waxaana isa soo dhiibay ciidamadii dagallamayay iyo hoggaankii sare ee ASWJ, waxayna ugu dambeyntii isaga baxeen dalka Soomaaliya, iyagoo haatan dibad-joog ka ah muddo hal sano ah waddanka Soomaaliya.
Madaxweyne Axmed Qoorqoor oo talada Galmudug kula wareegay awoodda uu ka helayo ciidamda Haramcad iyo kuwa Gorgor ayaa muddo sanad ah waxa uu ka talinayaa Galmudug, iyadoo aan weli laga gaarin wax horumar ah deegaanada Galmudug oo ay joogaan ciidamo laga keenay Xamar iyo kuwii hore ee Galmudu oo isugu jira Darawiish, Nabad-sugid iyo Boolis intaba.